Maqaarka qalalan: waa maxay, sida loo daryeelo iyo in ka badan! | Ragga Stylish
Michael Serrano | | Is-qurxinta, Daryeelka shaqsiyeed
Haysashada maqaarka qalalan iyo u ekaanshaha cillad la’aan waa wax suuragal ah. Waa inaad si fudud u bixisaa daryeelka lagama maarmaanka ah.
Raadi sida loo aqoonsado iyo nooca nadaafadda ee aad u baahan tahay, iyo sidoo kale cuntooyinka aan ka maqnaan karin cuntadaada:
1 Sida loo ogaado haddii aad leedahay maqaar qalalan
2 Sida loo daryeelo maqaarka qalalan
2.1 Maqaar iyo gadh qallalan
2.2 Sidee loo dhaqaa wajigaaga
2.3 Sida loo waraabiyo wajigaaga
2.3.2 Serum + Kareemka qoyan
2.3.3 Saliida wajiga
3 Waxa la cuno si loola dagaallamo maqaarka qalalan
Sida loo ogaado haddii aad leedahay maqaar qalalan
Lahaanshaha maqaarka qalalan waa mid aad u badan. Intaa waxaa dheer, waxay soo bandhigeysaa calaamado taxane ah oo si fudud u fudud in la aqoonsado sida oo kale. Haddii maqaarkaagu dhagan yahay oo caajis yahay, tani waxay u badan tahay nooca maqaarkaaga. Waxay sidoo kale u muuqataa finan iyo cuncun, dhibaatooyin lagu xoojiyo xiirashada.
Sida loo daryeelo maqaarka qalalan
Maqaarka qalalan, iyo sidoo kale dhammaan noocyada maqaarka, waxaa lagama maarmaan ah in nadaafadda nadaafadeed lagu dhaqmo si joogto ah oo sare ayna ku jiraan alaabada ku habboon. Haddii kale waa wax yar oo la isticmaalo.
Maqaar iyo gadh qallalan
Wax kastoo aad dooratid timaha wajiga (xiir xiro, seddex maalmood oo jajab ah, ama gadh dheer), Sifeynta jirka waa tallaabo muhiim u ah nadaafadda markaad leedahay maqaar qalalan.
Waxyaalaha jirka sii daayaa waxay soo saaraan lakabka khafiifka ah ee maqaarka, jilciso duullimaadyada oo timaha ka sooca maqaarka. Sidan oo kale, mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xun ee nadaafadda ragga guud ahaan (haddii aysan ahayn tan ugu xun) ayaa looga hortagayaa: timaha soo gala.
Waad xoqin kartaa garkaaga dhowr jeer usbuucii, laakiin iskuday inaadan horay u xiirin. Maqaarka oo loo hoggaansamo labadan geedisocod isla mar ahaantaana waxay sababi kartaa xanaaq ka badan kan loo baahan yahay. Joogtaynta ku habboon ayaa ka duwan xaalad kasta, in kastoo usbuucii laba jeer wuxuu bixiyaa natiijooyin wanaagsan kiisaska badankood.
Waxa ugu muhiimsan marka ay timaado ka soo saarista maqaarka qalalan waa in diiradda la saaro ka hortagga casaanka iyo cuncunka. Si loo helo Xusuusnow inaadan isticmaalin walxaha qarxa oo aad ugu xoog badan maqaarkaaga ama ku xoq xoog ka badan intii loo baahnaa.
Sidee loo dhaqaa wajigaaga
Haddii aad leedahay maqaar qalalan way ku habboon tahay inaad wejigaaga biyo diirran ku dhaqdo dhig biyo kulul ama qabow. Heerkulka ba'an wuxuu sii xumeyn karaa la'aanta biya la'aanta, wejiga iyo dhinacyada kale ee jirka. Sidoo kale laguma talin karo in la beddelo heerkulka biyaha inta hawshu socoto. Waa quraafaad in ay faa'iido u tahay daloolada. Runtii way jebin kartaa xididdada dhiigga.
Ma isticmaashaa nadiifinta wajiga? Xaaladdaas, hubi inaadan dareemin cuncun iyo cidhiidhi ka dib markaad wajiga ku dhaqdo. Haddii waxyeelooyinkani dhacaan, waxaad u maleyneysaa inaadan isticmaalin nadiifiyaha saxda ah ee maqaarkaaga. Waxaa jira dhowr waxyaalood oo maaddooyin indha-indheyn ah oo ku jira nadiifiyayaal fara badan oo wajiga ka mid ah oo sida ugu wanaagsan looga fogaado marka laga cabanayo maqaarka qalalan, sida zinc sulfate ama salicylic acid
Biyaha Micellar, kareemka nadiifinta ama xumbo nadiifinta ... qaab kasta oo aad doorato, waxa muhiimka ahi waa inaysan keenin xanaaq. Ka hubi iibiyaha haddii shaki jiro. Waxaad ogaan doontaa inaad heshay nadiifiyaha ugufiican maxaa yeelay maqaarkaaga wuxuu ahaanayaa mid cusub oo jilicsan ka dib isticmaalkeeda.
Sida loo waraabiyo wajigaaga
Maaddaama maqaarka qalalan uu u baahan yahay qoyaan badan (oo sidoo kale xallin karo dhibaato la'aan), ku adkeyso casaanka iyo cuncunka adoo sharad ku leh huureeye oo bixiya dheecaanka ugu qoto dheer ee suurtogalka ah.
Hadda, kareemada maalinlaha badankood horeyba waxaa ugujiray qorraxda, laakiin waligeed dhib malahan inaad hubiso. Sifadaani waxay si weyn u yareysaa cuncunka ay keento dhaawaca qorraxda.
Serum + Kareemka qoyan
Tixgeli inaad iskudareyso qoyaan-qorahaaga serum. Shaqadii hore ee lakabyada sare ee maqaarka (oo wali muhiim ah), halka seermiyadu si qoto dheer u dhex gali karaan sababo la xiriira qaab dhismeedkooda molekuleed ee yar. Natiijadu waa dheecaan dhameystiran.
Maqaarka oo muddo dheer qallalan wuxuu si weyn uga faa'iideysan karaa faa'iidooyinka saliidaha wajiga. Saliida wajiga wanaagsan ma keento madax madow; waxayna ku daraan fiitamiino, antioxidant, iyo asiidh dufan oo muhiim ah qaaciidooyinkooda. Intaa waxaa dheer, ku dheji biyaha maqaarka si ay u xoojiso xayndaabkeeda difaaca.
Waxa la cuno si loola dagaallamo maqaarka qalalan
ka Omega 3 acids acids fat (Tuna, salmon, iniin flax ah, iniinta ...) waxay ka caawisaa unugyada inay ka koobnaadaan biyo badan. Maqaarka qallalanina wuxuu u baahan yahay biyo inta ugu badan ee karaankaaga ah si aad ugu ekaato mid siman mar labaad.
Cun xoogaa yar oo miro ah maalin kasta Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah daaweynta maqaarka qalalan ee ugu fiican halkaas. Waana inay ku siiyaan antioxidants, fiitamiinno iyo biyo si ay kuu ahaadaan kuwo caafimaad qaba oo qoyaan leh.
Dhinaca kale, fiber iyo cagaarka caleenta ah ayaa kaa caawin doona inaad ka ilaaliso hormoonnada walbahaarka iyo arrimaha deegaanka qaarkood, taas oo ka dhigi karta maqaarkaaga mid qalalan. Sirta ayaa ku jirta maadooyinkeeda jirka ee muhiimka ah, ee ka hortaga xagjirnimada bilaashka ah ee jirka gudihiisa. Qiyaasta maalinlaha ah ee lagu taliyey ee ah fiberka ragga waa 38 garaam. Waa in la ogaadaa in wax badan oo la cunaa ay caqabad ku noqon karto habka fuuq celinta maqaarka, waana sababta ugu wanaagsan ee lagula talin karo inaadan ka badin qaddarkan markii aad leedahay maqaar qalalan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Maqaarka qallalan